Fuji MoreZ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသြစတြေးလျ✂️ - Japan Scissors
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ & Pouches
ရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
Fuji MoreZ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသြစတြေးလျ
မတ်လ 28, 2020 - ဖတ်ပြီးသားမိ 5
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဖူဂျီ fuji morez ဂျပန်
Fuji MoreZ ကတ်ကြေးဂျပန် ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာမည်အကြီးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ပေးရသည့်ငွေကိုသင်ရရှိပြီး၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Fuji ကတ်ကြေး။
မှဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်သောအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသံမဏိများကိုအသုံးပြုခြင်း Hitachi သတ္တုများသူတို့သည်ထိပ်တန်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုပြုလုပ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့လာမယ့်ဤအရာတစ်စုံ Yasaka or Jaguar ကတ်ကြေးသည်သင်၏ Toyota Camry ဘေးတွင်သင်၏ Porsche ကိုရပ်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Premium Hitachi သံမဏိ
ခုံး Edge ဓါးသွား
$ 500-2500 အကြားစျေးနှုန်း
အရွယ်အစား:5", 5.5",6", 6.5" နှင့်7"
ပုံစံများ - X Series, GGF, MF, GF Long, VF, SF, DXGF, DXVF, NL, DXF, XG, XA နှင့် X
သင်သည်အကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်များကိုရှာဖွေသောအခါ၊ Fuji MoreZ စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှာအမြဲရှိနေသည်။
နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ Fuji ကတ်ကြေးများသည်ရိုးရာဓားလုပ်ရာတွင်နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိစေသည်။
သူတို့ဟာအနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်တယ်၊ ဒါကိုသင်တိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်တယ် Fuji ၎င်းကိုမူလကပြုလုပ်ခဲ့သောလူများမှပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ချွန်ရန်ကတ်ကြေးများ။
များစုဆောင်းခြင်း Fuji ကတ်ကြေးများသည်အနုပညာလက်ရာမြောက်သည့်အနုပညာလက်ရာများဖြစ်သည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Fuji မှလူကြိုက်အများဆုံးမော်ဒယ်များကိုပြိုကွဲသွားမည်။
Fuji ပိုများသော Z GGF
စျေးနှုန်းGGF Pair ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကနေ ၁၈၀၀ ကြားမှာ
အရွယ်အစား: ၆”၊ ၆.၅”၊ ၇” နှင့် ၇.၅”
သံမဏိ: Super Cobalt အလွိုင်း
သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်သည် Fuji ပိုများသော Z.
GGF Long Blade သည် 7” သို့မဟုတ် 7.5” လက်မဓါးရှည်ကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်ဘာဘာဘာအတွက်အကြံပြုသည်။
ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်သူများအတွက်လောင်ကျွမ်းမှုလျှော့ချရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်ကျွမ်းကျင်သော Ergonomics သည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်းတို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကတ်ကြေးအတွက်ရှားပါးသော“ Self Sharpening” အဆင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆံပင်များအတွက် 5/5 ကြယ်များပေးပါသည်။ သူတို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Ergonomics၊ တစ်သက်တာတည်မြဲသောအရည်အသွေး၊ ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်မှုများနှင့်ချွန်ထက်စေရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း Fuji GGF ကတ်ကြေး
Fuji နောက်ထပ် Z GF
စျေးနှုန်းGF Pair ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကနေ ၁၈၀၀ ကြားမှာ
အရွယ်အစား: ၅.၅”၊ ၆”၊ ၆.၅”၊ ၇” နှင့် ၇.၅”
သူတို့ကချွန်ထက်သောခုံးအစွန်းဓါးနှင့်ထူးခြားသောရှိသည် Fuji သူတို့ကိုတင်းကျပ်စွာနှင့်ညှိအတွက်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်သော Center ကိုဝက်အူ။
"ငါတို့မှာ GF6ညှပ်ကိုစမ်းဖို့အခွင့်အရေးပဲရှိခဲ့ပေမယ့်သူတို့ဟာထူးဆန်းပြီးခံစားခဲ့ရတယ်" လို့ ၀ န်ထမ်းများကပြောကြားခဲ့သည်။ Fuji စျေးကွက်အပေါ်ညှပ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄.၅ / ၅ ကြယ်များကိုတစ်သက်တာလုံးရှင်သန်ရန်ကောင်းမွန်သောတွဲဖက်တစ်ခုအဖြစ်ပေးသည်။
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း Fuji GF ကတ်ကြေး
Fuji နောက်ထပ် Z VF
စျေးနှုန်းVF Pair ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကနေ ၁၆၀၀ ကြားမှာ
အရွယ်အစား: ၅.၅” နှင့် ၆”
သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်သည် Fuji ပိုများသော Z. အဆိုပါ VF Fuji ကတ်ကြေးများသည် semi-offset Crane Handle ညှပ်များဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သင်၏လက်၌သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးလက်မနှင့်ဖိအားနည်းမှုများကိုလျော့နည်းစေသည့် crane လက်ကိုင်ပါသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အလွန်အမင်း ergonomics ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ပေါ့ပါးသော်လည်းသင်၏လက်၌အားကောင်းသည်ဟုခံစားခဲ့ရပြီးလက်တွေ့ကျသည့်ဖြတ်တောက်မှုအနည်းငယ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောကိုဘော့အလွိုင်းသံမဏိများသည်၎င်းကိုအလွန်ကြံ့ခိုင်ပြီးယေဘုယျ ၀ တ်စားမှုနှင့်ချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
"ကျနော်တို့ကကြယ် ၄/၅ ကိုသြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ Fuji ရဲ့အကောင်းဆုံး ergonomic ကပ်ကြေးတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်ပေးတယ်။ "
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း Fuji VF ကတ်ကြေး
Fuji ပိုများသော Z SF Lefty
စျေးနှုန်းSF Pair ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကနေ ၁၆၀၀ ကြားမှာ
SF လက်ဝဲဘက် Fuji ဆံပင်ညှပ်သည်ဤပရီမီယံဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူထံမှထင်ရှားသော lefty shears များဖြစ်သည်။
အပြင်းထန်ဆုံးဖြတ်တောက်မှုများအတွက်ကြံ့ခိုင်ဂျပန်သံမဏိ, Sharp ခုံး Edges နှင့် Fuji အချောမွေ့ဆုံးဖြတ်တောက်မှုလှုပ်ရှားမှုအတွက်တင်းမာမှုကိုထိန်းညှိ။
ဤကြယ် ၅/၅ ကို Fuji ၏လက်ဝဲလက်ဂျပန်ဆံပင်ညှပ်အလှဆင်ခြင်းများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း Fuji SF လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေး
Fuji ပိုများသော Z DXGF
စျေးနှုန်း: DXGF Pair လျှင် $ 800 မှ 1300 အကြား
သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်သည် Fuji ပိုများသော Z. အဆိုပါ DXGF Fuji ညှပ်သူတို့၏ကြာကြာအရှည်များအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြယ် ၄/၅ ကိုပေးပြီးအနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ကြာရှည်စွာခံနိုင်မည့်အရည်အသွေးမြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်ဆံပင်ညှပ်များအတွက်အကြံဥာဏ်ပေးသည်။
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း Fuji DXGF ကတ်ကြေး
Fuji နောက်ထပ် Z MF
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၈၀၀ ကနေ ၁၃၀၀ ကြားမှာ MF Pair အတွက်
အရွယ်အစား: ၅၊ ၅.၅”၊ ၆” နှင့် ၆.၅”
အဆိုပါ Fuji Z Z MF မော်ဒယ်များသည်၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။
သူတို့ဟာအသုံးအများဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအရွယ်အစားကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးစျေးကြီးသောမော်ဒယ်များကိုအလွန်လူကြိုက်များစေသည့်ခေါင်းလောင်းများနှင့် ၀ ီစီခပ်များလည်းပါဝင်သည်။
"ရိုးရှင်းသောဟန်ချက်ညီမှု၊ offset ပုံစံနှင့်ချွန်သောခုံးအနားသတ်ဓါး" သည်ဤကတ်ကြေးများအတွက်အဓိကအရောင်းရဆုံးနေရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကြယ် ၄.၅ / ၅ ကြယ်များကိုသူတို့၏စျေးနှုန်းနိမ့်ကျမှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်သြစတြေးလျရှိအလှပြင်ဆိုင်များ၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားများကြောင့်ပေးသည်။
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း Fuji MF ကတ်ကြေး
James Adams သည်စာရေးသူဖြစ်သည် ဂျပန်ကတ်ကြေးများအတွက်။ သူသည်အစပြုသူနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရေးသားရန်အာရုံစိုက်သည်။
ရောနှောခြင်းနှင့် texturizing ကတ်ကြေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
ဇန်နဝါရီလ 16, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2